तनावको बेला दिमागलाइ सन्तुलनमा राख्न के गर्ने ? - Baikalpikkhabar
तनावको बेला दिमागलाइ सन्तुलनमा राख्न के गर्ने ?
जस्तै स् मा यो काम गर्न सक्छु कि सक्दिन होला, अब यसपछि फेरी कस्तो समस्याको सामना गर्नुपर्ने होला, यस्तै यस्तै कुराहरु मनमा खेलिरहन्छन । जब मानिसहरुको मनमा अनेकौ कुराहरु खेल्न थाल्दछ तब ऊ डिप्रेसनमा जान सक्दछ ।
सकारात्मकसोच डट कम बाट
बिहिबार, ०९ माघ, २०७६, दिउँसोको ०१:४१ बजे